Lacagtaan isticmaalkeeda bishaan ayaa u dambaysa | Somaliska
Dhamaadka bishaan Juun ayaa u dambaysa isticmaalka lacagaha hore ee 20-, 50- iyo 1 000. Waxaa sidoo kale isticmaalkooda joogsanayaa qadaadiicda 1, 2 iyo 5. Iyo waraaqaha 100 iyo 500. Ugu dambeyn 30-jun ayaa lacagaha hore ee qiimahooda yahay 20-, 50- iyo 1 000 isticmaalkooda la joojin doonaa. Gacanta dadweynaha Sweden ayaa hada waxaa ku jidha lacagtii hore oo qiimahooda yahay 2,6 bilyan oo karoon.
Ilaa bishii oktoobar ayaa Bankiga dhexe ee Sweden (Riksbanken) waxay qeybiyeen lacag cusub oo qiimahooda gaaraya 4,9 bilyan oo karoon balse ilaa hadda waxaa dadka ku hartay 2,6 bilyan oo lacagtii hore ah oo gaaraysa 57 milyan oo warqadood.
“Waxaan ugu baaqaynaa shacabka in ay lacagtii hore dukaamada wax uga iibsadaan ama ay bankiga ku shubtaan ugu dambeyn 30-bisha juun. “ ayay tiri Ann-Leena Mikiver oo ah afhayeenka Bankiga dhexe.
Dadka aan isticmaalin lacagtii hore ee dhacaysa 30-bisha Juun ka dib ayaysan dukaamada wax uga iibsan karin balse waxay ku shuban karaan koontada.
Wixii faahfaahin ah ee ku saabsan lacagaha cusub halkaan ka akhriso [PDF]
waxyar ankusaxo “riksdagen maha ee waa riksbanken.
arintaan wexey quseysa qofkii lacagi u keydsantahay
igadaa ciyaarta says:
aniga ayaa 100 karoon igudhici rabta waa inaan kagaar siiyaa o an bangiga kushunaa
June 2, 2016 at 02:48
(1000) kr oo isku dhagan wali ma arkin???!!! Maxaad kawadaa halkaa ukhtii 20,50,1000 ??!!
Asc dhamaan ☺ walaalaha mesha ku jira.
100kr miyaa mase 1000 kr i fahansiiya